News Collection: खुशिबाट डराउँछिन् महिला निर्देशक !
खुशिबाट डराउँछिन् महिला निर्देशक !
खुशिदेखि कसैलाई डर लाग्दैन । तैपनि सुसन केसी डराइरहेकी छिन् । यी महिला निर्देशक तथा गीतकारलाई पछिल्लो समय सबैभन्दा डर लागिरहेको पनि खुशिबाटै हो । आफ्नो सोसल साइटमा आफूलाई खुशिदेखि डर लाग्ने कुरा लेखेपछि मोडल समेत रहेकी सुसनका फ्यानहरुले कारण खोल्न दवाव दिइरहेका छन् । 'लाग्छ मलाई खुशिदेखि डर लागिरहेको छ किनकी म हरक्षण खुशि भैरहन्छु' साइटको भित्तोमा उनले लेखेकी छिन् 'किनकी ती खुशिले केही गल्तीहरु सिर्जना गरिरहेका छन् ।'
मेरोसिनेमासँग गफिँदै उनले सानातिना खुशिले दुःख निम्त्याएको बताइन् । 'म भन्छु भगवानले मलाई धेरै विश्वास नगरुन' सुसन भन्छिन् । तर कस्ता खुशि र कस्ता दुःख सुसनको अगाडि आए मरिगए भन्न मान्दिनन् । हुनुपर्छ उनले एसिस्टेन्ट डिरेक्टर भएर काम गरेको सिनेमा 'मालतीको भट्टी' यतिबेला सम्पादनको चरणमा छ र जटिलता खेपिरहेको छ । या उनी कुनै नयाँ सिनेमा निर्देशन गर्न चाहन्छिन् जसका लागि उनले चुनौति खेपिरहनुपरेको छ । या उनी कुनै एल्बमका लागि गीत लेख्न लागिरहेकी छिन् । या मोडलिङका क्रममा सुसनलाई पीडाहरु भए । यद्यपी के कुरा पक्का हो भने एकछिनको खुशि बेलुनजस्तै फुट्यो ।
सुसन नयाँ प्रोजेक्ट निर्देशन गर्न चाहन्छिन् । यतिबेला चिसोले लागेको ज्वरोबाट मुक्त हुन प्रयास गरिरहेकी यी निर्देशकलाई उनका प्रशंसकहरुले खुशिबाट नभाग्न र दुःखमा नआत्तिन सुझाएका सुझायै छन् । के सुसन खुशिबाट अब डराउलिन ?